CAANAHA DHAADHEER: UBAXYADA, DARYEELKA, SAWIRADA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida dhirta xayawaanka ah ee caleenta geedo gudaha ah laguma yaqaanno dad badan, maaddaama dhirtaas ay heshay caan uwanaagsan sababtoo ah qiimaha dhaqaalaheeda iyo waxtarkeeda. Laakiin inkastoo tani, ubaxa wuxuu burburiyaa dhammaan qalabixinta in ay ku haboon tahay oo keliya sida wax cayriin ah, sida caddaynaya ubaxeed dhalaalaya oo qurux badan. Si kastaba ha noqotee, kalluunka sii kordhaya ee qulqulka wuxuu u baahan yahay aqoon dheeraad ah. Sidaa darteed, maanta waa inaan soo bandhigno dhammaan siraha ah ee beerista saxda ah ee ubax weyn oo ubax ah oo ku yaal ubax guri.
Qaxwaha weyn ee loo yaqaan 'Flax Flower' waa geedka sanadlaha ah, beerta dabiiciga ah ee waqooyiga galbeed ee Afrika, marka lagu daro qaabkeeda duurjoogta ah waxaa si ballaaran loogu soo bandhigaa waqooyiga Ameerika iyo koonfurta Yurub. Noocyada waxaa lagu beeray oo kaliya ujeedooyinka loo qurxiyo, maadaama qiimaha dhaqaale ee la yareeyo.
Ma taqaanaa? LDabiiciga waaweyn-ubax ayaa la helay iyada oo laga mahadcelinayo Botanistaha Faransiiska ee René Defontaine. Waxay ahayd cilmi-baaristaan ​​oo marka hore ku sharraxay noocyadaas 1798..
Heerka ugu sarreeya ee xoqan wuxuu gaaraa 105 cm, laakiin xaaladaha intooda badani waxay u dhaxeysaa 30 illaa 60 cm Qalabkuna waa mid aad u sarreeya oo la jarjaray, si fiicanna loo daboolay caleemaha beddelka ah ee cayayaanka ah oo leh dhamman calaamadda caadiga ah.
Qaabka caleenka caleenta ah waa mid ballaaran ama lowsolate leh qaab dhismeed saddex-astaamo ah, dhererkuna aanu ka badnayn 2.5 cm (celcelis ahaan, laga bilaabo 1.5 illaa 2 cm).
Sharafta ugu weyn ee noocyada ornamental ee noocyada this waa ubaxyo badan oo casaan leh casaan leh. Waxay ku yaalaan xagga sare ee asliga ah waxaana lagu ururiyaa inflorescence xarrago leh oo dhexdhexaad ah oo aan ka badnayn 3 cm. Muddada ubaxu waxay bilaabmaysaa guga horraantii waxayna socotaa ilaa qeybta hore ee Oktoobar. Ka dib markaa, sanduuq miro leh dhexroor oo qiyaastii 5 mm waxay u muuqataa geedka, taas oo tiro badan oo ah miraha buniga ah ee la isku qurxiyo oo ku saabsan 4mm oo dherer ah qaabdhaca. Lambarka 1 g waa mid aad u ballaaran wuxuuna gaaraa 300 gogo '.
Nidaamka dhirta ee sanadlaha ah waxaa sidoo kale ka mid ah helihrizum, ubax la qalajiyey, rudbeckia, nemesia, diris, coleus, geedka xiga, habeenkii madow, soodhaweyn karey, yaskolku, shimbiraha sare, alissum.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee lagu kori karo xayawaanka qurxinta ee guriga waa abuurista geedo dhirta laga soo bilaabo abuurkii hore ee la kariyey, ka dibna lagu beeray ubax.
Marka xigta, waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa dhamaan sifooyinka hawshan, lana wadaagno qarsoodi ah guulahiisa.
Ma taqaanaa? The seeds of flax weyn-ubax leeyihiin hufan aad u sareeya, biqilka ay xitaa 5 sano ka dib kaydinta soo dhowaad 100%.
Si aad u hesho geedo, muddada ugu fiican ee beerashada abuur waa bartamihii April. Cuntada xayawaanka leh ee dhaadheer waxaa loola jeedaa dhirta ay abuurayaan abuurka oo aan si gaar ah u adkaan karin, laakiin si loo helo geedo wacan, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo xilliga jiilaalka. Haddii kale, dhirta waxay yeelan doontaa habboonayn yar oo lagu beeray ciidda furan.
Diyaargarow dheeraad ah ka hor beerashada abuurka uma baahnid, sida ay ku sifoobaan biqilka sare. Wixii beeridda waxay isticmaalaan weelasha beerta gaarka ah ee biqilka, laakiin ujeedkani wax kasta oo bilaash ah ayaa qaban doona.
Beeridda waxaa lagu sameeyaa sambabada, substrates dabacsan. Xayawaanku waxay ku jirtaa weelka leh lakabka aan ka badnayn 10 cm (qadarka ugu wanaagsan waa 8 cm), ka dibna waxaa si fiican loo qasi karaa jardiinada beerta. Ka dib markii in, abuur ah ayaa si siman u kala firdhiyey aagga ciidda iyo daboolay lakabka carrada ee ku saabsan 1 cm.
Si loo dedejiyo habka biqilka, waxaad abuuri kartaa xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho taangiyada bac ama balaastik.
Waa muhiim! Boorashka caleenta uma dulqaadanayo qoyaan badan, sidaa darteed, marka biqil laga abuuro filimka filimka, qaab dhismeedka waa in maalin kasta la qalajiyaa.
5-10 maalmood ka dib, caleemaha ugu horeysay u muuqdaan, ka dib markii taas oo dhirta laga nadiifin karo qumbaha polyetylen. Ka dib 2 caleemo dhab ah muuqan on geedo, dhirta waxaa loo wareejin karaa dheriyo gooni ah. Iyada oo aan geedi socodka lagama maarmaan u aheyn in la adkeeyo, maadaama si kedis ah ay u koraan. Haddii aad seegto wakhtiga ugu fiicneyn ee qoob-ka-shaqeysiga, dhir-beelka dhirta oo aan dhaawacayn nidaamka asaasiga ah ayaa ku fashici doona.
Kadib marka la gaaro celceliska heerkulka maalinlaha ah ee ku saabsan +20 ° C, geedo waxaa lagu beeray ciidda furan ee ubaxa, kaas oo waa in la diyaariyaa horay. Si arrintan loo sameeyo, 1 digrii. m carrada waxaa lagu dabaqaa 4 kg ee compost ama humus, 1 tbsp. l superphosphate iyo 1 tbsp. l potassium sulfate, ka dibna wax kasta waa in si taxadar leh loo qodo oo loo kabo.
Dhulku si dhakhso ah looguma talin, waxaa lagama maarmaan ah in ciidda looga tago oo keliya 1-2 maalmood.
Qoob-ka-soo-baxa ee hawada furan waa habka ugu fudud ee lagu beerayo warshadkan, maadaama uusan u baahneyn hababka beeraha iyo qalabka gaarka ah. Beeraha si toos ah dhulka loogu furo waa la qabtaa dhamaadka xilliga dayrta (xilliga qaboobaha) ama bilowga Maajo. Ka hor inta beero, waa lagama maarmaan in la diyaariyo ciidda horay, iyada oo ku saleysan tiknoolijiyada horay loo qeexay (bacrinta iyo beeritaanka).
On ciidda la diyaariyey iyo heerarka sare, qodo godadka dhererka 5 cm qoto dheer iyo 15 cm oo ka duwan midba midka kale. Seeds waxaa lagu beeray si aad u badan ee daloolka diyaarisay, ka dibna waxay ku shubtay qadar yar oo ciid ah oo ka waraabiyey.
Waa muhiim! Si loo gaaro ubax muddada dheer ee aagga caleemaha waaweyn, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo trick yar, oo ah: marar goynta xayawaanka dhicisoobay, taasoo kicinaysa warshad si ubax cusub.
Ka dib muuqaalka caleemaha ugu horreeya sariirta, waxaa lagama maarmaan ah in ay dhuuban, iyo masaafada ka mid ah warshad si kale waa in 8-10 cm.
Kaxda, sida noocyada ugu badan ee aan noolaan karin, waxay dacaayad abuurka, taas oo u rusheeyaa miro-sanduuqyada. Xaaladdan oo kale, beerto iyo daryeelidda warshadu waa muhiim. Sidoo kale koolada waxaa lagu faafin karaa qudaar ahaan.
Tani, qeybo ka mid ah ubaxa ayaa lagu qooyay xalka khaas ah oo ka caawiya inay si fiican u shaqeeyaan.
Habka qaybta ugu badani ma aha mid caan ah, sida kaxda ayaa waxtar leh, iyo, ugu muhiimsan, isla markiiba faafin by abuur.
Sidaa daraadeed, kobcinta daaqsinka waxaa lagu macneeyaa keliya kiisaska aan caadiga ahayn marka aysan suurtogal ahayn in lagu ilaaliyo warshadda beeraha ee habka kale.
Flax-weyn oo ubax ah waxaa loola jeedaa noocyada, beeritaanka iyo daryeelidda taas oo berrin bannaan ma soo bandhigo wax badan oo adag, xitaa loogu talagalay beerta hiwaayadda, sida noocyada this waa wax aan qabyo ahayn. Si kastaba ha ahaatee, si ay u koraan warshad ubax caafimaad leh, waxaad u baahan tahay inaad raacdo qaar ka mid ah tilmaamaha loogu talagalay daryeelka.
Ma taqaanaa? Qaxwaha weyn ee ubaxyada ah waxaa lagu soo bandhigay dhaqanka 1820, ka dib markii sanadihii dhowrkii sano ee sanadkan ubaxa ah uu ku guulaystay dhammaan dhinacyada Yurubta casriga ah, ilaa gobollada adag ee taiga.
Ubaxa, ugu horreyntii, ayaa iska leh noocyada jecel goobaha furan iyo kuwa dhalaalaya. Sidaa daraadeed, aagga iftiinka qorraxda ka baxsan xayawaanka dhirta dheer wuxuu noqon doonaa meel fiican oo loogu talagalay in lagu beero geedka sariirta ubaxa.
Si kastaba ha ahaatee, joogitaan dheer oo qorraxdu si toos ah u saameynayso muuqaalka ubaxa, sidaa daraadeed, si loo gaaro qiimaha qurxinta ugu wanaagsan, waa lagama maarmaan in la bixiyo iftiinka kaliya. Caleemaha waaweyn ee xayawaanka ah ayaa sidoo kale aan qabin carrada, laakiin fursada ugu fiican ee ay tahay waa carradu iftiin, horey loo bacrimiyey humus ama compost, iyo sidoo kale bacriminta gaarka ah ee dhirta ubaxyada.
Intaa waxaa dheer, ubaxa, kaas oo si weyn u beeray leh ubax lagu qurxiyo, waa lagama maarmaan tahay in la dhajiyo ugu yaraan 1 jeer bishiiba.
Heerkulka heerkulka wanaagsan ee horumarinta ubax weyn oo caleenta ah waa +20 ° C, laakiin geedka ayaa dareemaya wanaag marka uu hoos u dhaco +12 ° C.
Waa muhiim! Inta lagu jiro waraabinta, ubax weyn oo ubax leh waa in aan lagu daadin biyo badan, ciidda waa inay qoyaan, laakiin aan dheellitirneyn. Haddii kale, geedka ayaa sugaya cudurada fangas khatarta ah, ilaa dhimasho.
Intaa waxaa dheer, dhirta si fiican u dulqaadan iyo caadooyin kulul ee sanadka, laakiin xaaladaha noocaas ah, sariirta ubax waa in lagu waraabiyo si dheeraad ah inta lagu jiro dhammaan muddada heerkulka sare.
Si loo gaaro waqti dheer ubax, dhirtu waxay ubaahantahay quudin dheeraad ah, taas oo loo baahan yahay in la fuliyo ugu yaraan 2 jeer xilli ciyaareed: inta lagu jiro muddada koritaanka firfircoon iyo horaantii ubaxa. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal bacriminta macdanta culus iyo isku dhafka gaarka ah ee ubaxyada qurxinta ubaxa.
Bacriminta macdanta waxaa ka mid ah ammonium sulfate, Sudarushka, Kristalon, Kemira, iyo Ammophos.
Sida caanaha dhirta badankooda, caleemaha waaweyn waxaa laga qaadaa cayayaanka iyo walxaha keena cudurada halista ah. Si looga adkaado cudurka fungal, isticmaal antibiyootiko loogu talagalay dhirta ficil fara badan.
Sidoo kale, haddii aad calaamado yaryar ku qorto xididdada geedka, tani macnaheedu waa dhaawac nematode ah. Si loola dagaallamo waxay isticmaalaan daroogooyinka gaarka ah. Xaaladda marka ubaxyada ay saameeyeen jilboolaha, habka soo socda ayaa loo fuliyaa: si taxadar leh uga saar meesha qaybta la gooyey ee geedka, ka dibna si taxadar leh ula daaweynta sariirta ubax leh shey kiimiko khaas ah.
Caanaha dhaadheer ayaa ah mid ka mid ah wakiillada yar ee dhirta ornamental ee ku faani kara loo yaqaan 'unpretentious', sida koolada oo koraya oo u kobcaya iyada oo aan ka qaybqaadan ninkii beerta ka shaqaynayay. Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho sariirta ubaxa ah oo hodan ku ah midabada dhalaalaya, waa lagama maarmaan in la siiyo fiiro ku filan ubax dhowr jeer xilli.
Xaaladdan oo kale, sariiraha ubaxaaga aad u jecel waxay noqon doonaan muuqaal dhab ah oo beerta.